Elele 10 nke ahụ ike kachasị mma nke mgbakwunye Glutathione Maka Gị - Wisdompowder
Glutathione bara uru ihe dị ndụ na ọtụtụ ụzọ site na ịme ka antioxidant. Ọ bụ amino acid dị na mkpụrụ ndụ mmadụ ọ bụla. Ihe ọ bụla dị ndụ n’anụ ahụ na-eri nri n’ahụ ya. Ọ bụ antioxidant dị ike nke mgbe ọ bụla enwere ọkwa zuru oke nwere ike ichebe anyị pụọ na ọnọdụ ahụike dị egwu dịka ọrịa Alzheimer, ọrịa obi, na ọbụna ọrịa strok.
Ọ bụ ezie na emepụtara antioxidant a n’ime mkpụrụ ndụ anyị glutathione nwere ike ịbanye n’ahụ anyị, tinye ya n’ọrụ, ma ọ bụ dịka inhalant.
Glutathione bụ ihe mejupụtara amino acid atọ mejupụtara: cysteine, glutamic acid, na glycine, ọ bụ antioxidant dị ike nke na - egbochi ma na - egbu oge ịka nkpuchi sel. Glutathione na-egbochi mmerụ ahụ nke mkpụrụ ndụ na-ewepụ kemịkal na-emerụ ahụ na imeju ma nwee ikike kekọta onwe ya na ọgwụ na-enyere ahụ ahụ aka ịghọta ngwa ngwa. Ọ na - arụkwa ọrụ dị mkpa nke ịkwalite ọgụ nke ahụ na ịhazi uto na ọnwụ nke mkpụrụ ndụ n’ahụ anyị. Achọpụtala ọkwa nke glutathione iji belata ịka nká.
Uru nke Glutathione
1. Na-ebelata nrụgide oxidative
Mgbe mmepụta nke radicals n’arụ na-abawanye, ma anụ ahụ enweghị ike ịkwụsị ya, ọ na-ebute nrụgide. Nnukwu nrụgide oxidative na-ahapụ ahụ maka ọnọdụ ahụike dịka ọrịa shuga, ọrịa ogbu na nkwonkwo na kansa. Glutathione na - enyere aka belata nchekasị oxidative nke na - enyere ahụ aka ichekwa ọrịa ndị a.
A makwara ọkwa dị elu nke anụ ahụ na - eme ka ọ dịkwuo elu antioxidants. Mmụba a na antioxidants tinyere glutathione na-ebelata nrụgide oxidative.
2. Nwere ike melite ahụike obi
Glutathione, ya na ikike igbochi oke abụba n'ahụ mmadụ, nwere ike nyere aka belata mbibi obi ọgụ na ọrịa obi ndị ọzọ. Ọria obi na - esite na mkpo ihe ncheta ihe na - eme na elu mgbidi.
Lipoproteins dị ala (LDL), ma ọ bụ kọlọdi ọjọọ, na-akpata ncheta site na imebi ihe dị n'ime akwara ndị ahụ. Ibe ndị a na-agbaji ma nwee ike igbochi arịa ọbara, na-akwụsị ka ọbara na-aga n'ihu ma na-akpata nkụchi obi ma ọ bụ strok.
Glutathione, ya na enzyme akpọ glutathione peroxidase, na-ebelata superoxides, hydrogen peroxide, radicals na lipid peroxides nke na - eme ọsịịlị. Nke a na - egbochi cholesterol ọjọọ na - emebi arịa ọbara yana ya mere ịmalite nke ihe. Glutathione si otú a na-enyere aka belata ihe ize ndụ nke nkụchi obi na ọrịa obi ndị ọzọ.
3. Na-echebe mkpụrụ ndụ imeju na-egbu egbu na ọrịa imeju na-egbu egbu
Mgbe enwere antioxidants na glutathione, ọtụtụ mkpụrụ ndụ imeju na-anwụ. Nke a na-ebelata ike imeju iji lụso ọrịa imeju na ọrịa imeju mmanya ọgụ. Glutathione, mgbe ọ nọ n’ọkwa zuru oke na-eme ka ogo protein, bilirubin na enzymes dị n’ọbara bawanye. Nke a na - enyere ndị mmadụ aka ịgbake n’ọrịa imeju na - egbu egbu ngwa ngwa.
Elu di elu glutathione usoro onunu ogwu nyere ndị ọrịa ọrịa imeju na-ezughị oke gosipụtara na glutathione bụ ọgwụgwọ kachasị rụọ ọrụ maka ọrịa ahụ. O gosiputala mbelata nke ukwuu na malondialdehyde, akara akara mbibi sel na imeju.
Edemede glyathione nke ọnụ gosipụtara gosipụtara na antioxidant ahụ nwere mmetụta dị mma na ndị mmadụ na-arịa ọrịa imeju na-adịghị egbu egbu.
4. Ọ na-enyere ọgụ ọgụ
Mmụta bụ otu n’ime ihe kacha akpata ọrịa ndị dị ka ọrịa obi, ọrịa shuga, na kansa.
Ihe mmerụ ahụ na-eme ka akwara ọbara dị na mpaghara merụrụ ahụ ka ọ gbasaa iji nyekwuo ọbara ọbara na mpaghara ahụ. Iri ọbara ndị a na-alụso ọrịa ọgụ na-egbochi mpaghara ahụ iji gbochie ohere ọ bụla ibute ọrịa. Ozugbo akụkụ ahụ merụrụ ahụ gwọrọ, ọzịza ahụ na-ebelata yana mkpụrụ ndụ ndị na-alụso ọrịa ọgụ belata. Mana na anụ ahụ na-adịghị mma metụtara nrụgide, nsí nsí, nri na-adịghị mma mmụba ahụ agaghị adalata ngwa ngwa.
Glutathione na - enyere aka n'ụdị dịka ndị a site na ịkwalite mkpụrụ ndụ ọcha. Ha na - achịkwa ọnụọgụ mkpụrụ ndụ ọcha na - aga mpaghara merụrụ ahụ dabere na oke nke oke.
5. Na-eme ka nguzogide insulin dịkwuo elu
Dika anyi n’etolitekwu, ihe ndi choro riri bu aru anyi na-ebelata ebe aru anyi na -eweputa nri karia. Nke a rụpụtara obere abụba abụba n’ime ahụ anyị. Ahụ ya na - echekwa abụba karịa. Nke a na - ebulite ikike ịbanye na insulin.
Nri nke na - eme ka cysteine ​​na glycine gha abawanye ga - eme ka mmeputa ihe ndi ozo di n’ime anyi. Ọnụnọ dị elu nke glutathione na - enyere aka iguzogide insulin na nnuku abụba dị elu.
6. Ndị ọrịa vaskụla ọrịa Peripheral na-ahụ ka ọ na - emegharị ahụ
Ọrịa akwara na-arịa ndị mmadụ arịa na-egbu ihe akwara ha. Ọrịa ahụ na - emetụta ụkwụ mmadụ n'otu n'otu. Nke a na - eme mgbe akwara ọbara gbochiri enweghị ike iwepụta ọbara achọrọ n’ọkpụkpụ olu mgbe uru ahụ chọrọ ya. Onye na-arịa ọrịa akwara na - enwe mgbu na ike ọgwụgwụ mgbe ọ na - eje ije.
Glutathione, nke a na-achịkwa ya ugboro abụọ n'ụbọchị, gosipụtara mmụba dị mma na ọnọdụ ha. Ndị ahụ nwere ike ije ije ebe dị anya ma ghara ime mkpesa maka ihe mgbu ọ bụla.
7. Glutathione maka anụahụ
Uru Glutathione na-emekwa ka ọ nọgide na-enwe anụ ahụ dị mma yana ịgwọ ya. A ga-eji mmamịrị glutathione mee ihe kwesịrị ekwesị, mmetọ anụ ahụ, eczema, wrinkles, na anya jupụtara.
Ojiji nke glutathione maka akpụkpọ ahụ na-egbochi tyrosinase, enzyme nke na-emepụta melanin. Ojiji nke glutathione ruo ogologo oge ga-eme ka akpụkpọ ahụ gbachapụrụ agbachapụ n'ihi mmepụta nke melanin dị obere. Egosiputala ya belata psoriasis, meziwanye udu aru, ma belata ahiri.
8. Ebelata mgbaàmà nke ọrịa Parkinson
Ala ọma jijiji bụ otu n'ime nsogbu ndị mmadụ na-arịa Ọrịa Parkinson na-enwekarị ahụhụ. Nke ahụ bụ n'ihi na ọrịa ahụ na-arịa usoro ụjọ nke etiti. Ọgwụ nchịkwa nke nchịkwa nke glutathione gosipụtara mmelite na ndị mmadụ site na ọrịa ahụ. Ọgwụgwọ ahụ mere ka ịma jijiji na nkwụsi ike dị na ndị ọrịa ahụ. Ekwenyere na glutathione nwere ike ime ka ndụ dịrị ndị na-arịa ọrịa Parkinson mfe site na mbenata mgbaàmà nke ọrịa ahụ na-egosi.
9. Na-enyere ụmụaka aka autism site na ibelata mbibi nke oxidative
Shownm withaka ndi nwere onwe ha ka egosiputara na ha nwere uhere di uku na uche ha. N'otu oge, ọkwa glucose dị ala. Nke a mụbara ihe egwu nke ụmụaka ahụ inwekwu mmebi akwara sitere na kemịkal dị ka Mercury.
Treatedmụaka eji ọgwụ ọnụnụ na ọgwụ glathionee gosipụtara mmụba dị elu nke ọkwa plasma sulfate, cysteine, na ọkwa glucose ọbara. Nke a na-enye olileanya na ọgwụgwọ glutathione nwere ike imeziwanye ụbụrụ na-arụ ọrụ na yabụ, ndụ ụmụaka nwere autism.
10. Nwere ike nyere aka ịlụ ọgụ ọrịa kansa
Ọrịa autoimmune gụnyere ọrịa celiac, ogbu na nkwonkwo, na lupus. Ọrịa ndị a na-akpata mbufụt na mgbu na-adịghị ala ala nke na-eme ka nrụgide oxyidative na-abawanye. Glutathione nwere ike ijikwa mmeghachi ahụ nke usoro ahụ site na ịkwalite ya ma ọ bụ belata ya. Nke a na-enye ndị dibia iji belata nrụgide oxidative na ndị mmadụ na-ata ahụhụ na nsogbu autoimmune.
Ọrịa autoimmune na-emebi mkpụrụ ndụ mitochondria na sel ụfọdụ. Glutathione na - enyere aka ichebe mitochondria cell site na ịlụ ọgụ maka radicals. Glutathione na-akpali sel ọcha na sel T ndị na-alụ ọgụ ibute ọrịa. Mkpụrụ ndụ T nke glutathione gosipụtara nwere ike dị ukwuu maka ịlụso ọrịa nje na nje virus ọgụ.
Ihe oriri Glutathione
Ka ahụ mmadụ na-etolite, ogo nke glucose na ahụ na-ebelata. Anyị kwesịrị iri nri ga-enyere ahụ aka weghachi ọkwa nke glutathione. Enwere ọtụtụ nri nwere ma ọ bụ nwere nri glutathione n'ụzọ nkịtị ma ọ bụ nri nwere oke ume nri.
Dika nri nri glutathione na-aga, protein whey nwere gamma-glutamylcysteine. Nke ahụ bụ ngwakọta nke glutathione na cysteine ​​nke na-eme ka ọ dịrị anyị ahụ mfe ikewapụ amino acid abụọ. Ha bụ ezigbo antioxidants.
· Nri allium
Ezi nri glutathione bụ nri sitere na osisi nke sitere n'ọmụmụ Allium bara ụba sọlfọ. Sulfur na-enyere ahụ anyị aka ịkpụpụta oke mmanu nri. Eyịm, galiki, scallions, chives, shalọl, na liza bụ nri dị na mkpụrụ ndụ ihe nketa niile.
· Akwukwo nri
Akwụkwọ nri na-anyụ ọnya nwere glucosinolates nke ga-eme ka ọ̀tụ̀tụ̀ glucose na ahụ gị ike dịkwuo elu. Ọ bụ ya mere osisi ndị na-ebu akwụkwọ nri ndị a ji nwee sọlfọ na-atọ ụtọ.
Kabeeji, kọlịflawa, brokoli, Kale, bok choy, brussel puree, arugula, radishes, watercress, na colard greens bụ akwụkwọ nri ndị na-adọrọ adọrọ.
· Ihe oriri nwere alfa-lipoic acid
Anụ ehi, anụ ahụ, akwụkwọ nri, yist nke brewer, na tomato bụ ezigbo mgbakwunye dị ka ha bara ọgaranya alpha-lipoic acid. Acid a na - abawanye ma na - eme ka ndụ glutathione dịrị gị mma.
· Nri Selenium bara ụba
Dika ihe ndi choro achogas nke nkpuru osisi n’enyere aru ahu aka n’ibuwanye mmanu ndi glutathione na ogwu ndi ozo. Ihe oriri nke nwere selenium bụ oporo, nri mmiri, àkwá, mkpụrụ nke brazil, asparagus, olu, na ọka ndị ọzọ.
Ihe mgbakwunye Glutathione
Nlekọta nri glutathione bia n'ụdị dị iche iche. Enwere ike iji ha kwuo okwu. Ma ọnụ a na-a takenụ aionụ a takenụ ahụ adịghị nke ọma n'ịgbanwe ọkwa anụ ahụ nke onyinye ahụ.
Betterzọ kachasị mma iji were ihe mgbakwunye bụ iji liposomal glutathione na afọ efu. Otu ihe eji eme ihe na - arụ ọrụ dị na etiti nke liposomes. Inweta mmeju a ọnụ bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka ogo ahụ dị elu.
A nwekwara ike iji mmiri ọgwụ pụrụ iche kagbuo glutathione. Mana ị ga-achọ ọgwụ maka iji ya.
Enwere transdermals na lotions dị nke enwere ike itinye n'ọrụ elu. Ọnụ ha maka ihe a na-anabata na-agbanwe agbanwe ma nwee ike ịdabere na ya mgbe ụfọdụ.
Nlekọta intravenị bụ usoro a kacha eji eme ihe na-a gụ ọgwụ glutathione. Ọ bụkwa ya kacha ụzọ.
Mmeju glutathione nwere ihe ndi ozo adighi adighi ike. Ndị a nwere ike ịbụ site na ịgba. eriri afọ, ikuku. oche tọgbọrọ chakoo, na mmeghachi omume nfụkasị ahụ Ọ ka mma ịgakwuru dọkịta gị tupu ị gụ ọgwụ mgbatị ahụ.
Glutathione usoro onunu ogwu
Thedị oriri glutathione achọrọ maka mmadụ nwere ike ịdị iche na afọ mmadụ, ibu ya, na physiology. Ọ pụkwara ịdabere na ọnọdụ ahụike ya na akụkọ ahụike ya. Ọ ka mma ịkpọtụrụ dọkịta gị ka ịlele ụdị usoro ọgwụgwọ ị ga-ewere.
Glutathione bụ ihe dị mkpa dị n’ime anyị. Ọ bụ ọgwụ antioxidant dị ike ma na-enyere ahụ aka ịnọgide na-enyocha ya na radicals n'efu. Nke a na-eme ka ahụike anyị na akụrụngwa dịka ọrịa obi, kansa, na nkụchi obi.
Ọ dị mkpa ịnwe ọkwa kachasị nke glutathione n'ime ahụ anyị. E nwere ụzọ dị iche iche anyị nwere ike isi mee ya. Anyị nwere ike iri nri glutathione bara ụba, na-a oụ ọnụ glutathione, tinye ya n'usoro na-arụ ọrụ intravenously.
Chọọ ndụmọdụ ahụike mgbe ọ bụla ị kpebiri ị supụ ọgwụ glutathione iji gbanwee ogo ya na ahụ gị.
Rouhier N, Lemaire SD, Jacquot JP (2008). "Ọrụ nke glutathione na photosynthetic organism: ọrụ na-apụta maka glutaredoxins na glutathionylation". Nyochaa Kwa Afọ Banyere Ọgwụ. 59 (1): 143–66.
Franco, R.; Schoneveld, OJ; Pappa, A .; Panayiotidis, MI (2007). "Ọrụ bụ isi nke glutathione na pathophysiology nke ọrịa ụmụ mmadụ". Nchịkọta nke Physiology na Biochemistry. 113 (4–5): 234–258.
1. Gịnị bụ Glutathione?
2. Uru Glutathione
3. Glutathione nri
5.Glutathione mmetụta utịp